က Tiger Woods '' အပြည့်အဝအားအမည်ဟာဘာလဲ,
"က Tiger Woods အမည်" ဝုဒ်၏ပရိသတ်များက်ဘ်ပေါ်မှာရှာဖွေတဲ့ဘုံဝေါဟာရကိုဖြစ်ပါတယ်။ , သူ့ပေးထားသောအမည်, ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မိမိဘွားအမည်, မိမိအပြည့်အဝနာမကိုအမှီ - ဟုတ်ပါတယ်, အဘယျသို့သောသူတို့ကိုရှာသိလိုက Tiger Woods '' အမည်ရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကျားရဲ့မွေးစာရင်းပေါ်သောအရာကို relaying အားဖြင့်တစ်ကြိမ်မှာအဲဒီမေးခွန်းတွေအပေါငျးတို့သညျသုံးဖြေဆိုနိုင်ပါ။ ကျားရဲ့အပြည့်အဝပေးနာမတော်သည်:
Eldrick Tont ဝုဒ်
ဒါပေမယ့်လူတိုင်းက "ကျား" (နှင့်သူ၏ဖခင်ပင်ကိုသူ့အဘို့အခြားအမည်ပြောင်ခဲ့) အဖြစ်သူ့ကိုသိတယ်။
သငျသညျသူက "ကျား" (နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အခြားအမည်ပြောင်ဖြစ်ပါသည်) ဟုချေါသညျအဘယျကွောငျ့သိရန်ချင်ပါတယ်လျှင်, ထုတ်စစ်ဆေး က Tiger Woods အမည်ပြောင် စာမျက်နှာ။
ကျားရဲ့ပထမအမည်: 'Eldrick' '
အဘယ်ကြောင့်ဝုဒ် '' မိဘများကသူ့ကို "Eldrick" ၏ပထမအမည်ကိုပေးခဲ့သလဲ သေချာပေါက်သင်တန်း၏, သူ၏မိဘများကြိုက်တယ်နှင့်ရွေးချယ်ထားသည့်နာမည်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းထက် ကျော်လွန်. , (ထိုကဲ့သို့သောဆွေမျိုးပြီးနောက်အမည်ရှိခံရဝုဒ်ကဲ့သို့) အကြောင်းပြချက်ရှိမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကြားဖူးတယ်တဦးတည်းပုံပြင် '(အဘ၏အမည်နှင့် Kultida, ဝုဒ်များအတွက် "K သည်" (' နှင့်အတူအဆုံးသတ်ဝုဒ်သူမက Earl, ဝုဒ်များအတွက်) အနေနဲ့ "အီး" နဲ့စတင်ခဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုရှာနေကြောင့်မိခင်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကောက်ယူ '' သောကွောငျ့ဖွစျသညျ မိခင်၏အမည်) ။
သူတို့အားကလေးအမည်ဖြင့်အကြံပြုချက်က်ဘ်ဆိုဒ်များကိုအရ "Eldrick" ဂြာမနျသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်မူရင်းသည်နှင့် "Eldridge" သို့မဟုတ်တစ်မူကွဲဖြစ်ပါတယ် "Aldric ။ " နာမမူလအဓိပ္ပာယ်ကို "ဖြောင့်မတ်အုပ်စိုးသောမင်း" သို့မဟုတ်ခဲ့တယ် "ပညာရှိအုပ်စိုးသောမင်းကို။ "
ရယ်စရာအရာကသူတကယ်ကသူ့ပေးထားသောနာမဖြင့်သမုတ်သောအခါဝုဒ် '' အသက်တာ၌မဆိုအချက်ဖြစ်အဲဒီမှာပေါ်လာပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။
သူကအမြဲမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကရန် "ကျား" ဖြစ်ရဲ့။ ဆဲဆယ်ကျော်သက်နေစဉ်ဂေါက်သီးအဖြစ်သူ၏ကျော်ကြားမှု၏အစောဆုံးကာလ၌အချို့သောသတင်းအစီရင်ခံစာများဝုဒ်အမှန်တကယ်ကျော်ကြားဖြစ်လာခဲ့သည်တစ်ချိန်က "Eldrick (ကျား) ဝုဒ်," ဒါပေမယ့် Eldrick လျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွားအဖြစ်သူ့ကိုဖော်ထုတ်ရန်ကိုပြု၏။
Related: ဝုဒ်တရားဝင် '' ကျား '' ရန်သူ၏ပထမအမည်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သလား
ကျားရဲ့အလယျပိုငျးအမည်: '' Tont ''
ဝုဒ်ကသူ့အရာရှိတဦးက Web site ပေါ်တွင်မိမိအအလယ်နာမည်စာရင်းပြုစုဘူး, နေသူ့ကွာရှင်းသက်ဆိုင်သောတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများသောအခါ "Tont" သာကျယ်ပြန့်သည်သူ၏အလယ်နာမည်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သည် အတှကျလညျး Nordegren 2010 ဝန်းကျင်လူထုဖြစ်လာခဲ့သည်။
"Tont," အမျိုးမျိုးသောသတင်းရပ်ကွက်အရသိရသည်ရိုးရာထိုင်းနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝုဒ် '' မိခင်, Kultida , ထိုင်းကနေဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ထိုင်းဇာတ်ညွှန်းအတွက်အကြိမ်အနည်းငယ်ရေးသားထားသောအမည် "Tont" ကိုမြင်ရပါတယ်။ သငျသညျသူတို့အား script ကိုဇာတ်ကောင် ယူ. Translate ကို Google သို့သူတို့ကိုငါ plug လျှင်, "အစအဦး" ၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်ရတယျ။
သို့ပြန်သွားသည် က Tiger Woods မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ အညွှန်းကိန်း
Annika Sorenstam အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဇန်နဝါရီ Stephenson က 1980 LPGA Tour မှဂလမ်ယူဆောင်
တွေ့ဆုံ Rory McIlroy ရဲ့ဇနီး Erica Stoll (Plus အားသူ၏ဟောင်းများလှုပျရှားအုံ)
Billy Casper: ဂေါက်ကွင်းရဲ့လျစ်လျူဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ
Bobby ဂျုံးစ်: အဂေါက်သီးဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအများ၏ကိုယ်ရေးဖိုင်
က Tiger Woods '' အိမ်နှင့်အိမ်နောက်ဖေးအလေ့အကျင့် Facility
ပလူတို, ရှေးဟောငျးအီ Underworld ၏သခင်
မြ Ash ကို Borer (Agrilus planipennis)
အဆိုပါ Long Island တွင် Serial Killer ၏ Unsolved ဖြစ်ရပ်မှန်
တစ်ဦး Mudang ဆိုတာဘာလဲ
အဆိုပါ Renaissance ၏ဂီတပုံစံများနှင့် Styles
Fantasy ဘတ်စကက်ဘော Play လုပ်နည်း
တစ်ဦးအငယ်တန်း Player ကိုများအတွက်ညာတာရှည်တင်းနစ်ဘောလုံးရိုက်ဝယ်ယူ
Absolute နှင့်အယူမှား Beginners မှအင်္ဂလိပ်ဆုံးမဩဝါဒပေး
ဘုံ (စားသုံးနိုင်သော) Periwinkle
အဘယ်ကြောင့်ခရစ်ယာန် Fellowship ဒါအရေးကြီးလား?
'' Bien '' နဲ့အတူပျော်စရာပြင်သစ်ဖော်ပြချက်
ဘုရားသခင့ခင်မှာဟာ့ဂ်ျ Exemplifies တန်းတူရေး